Free Mac DVD burner: Top 10 DVD-ere Ọkụ Software maka Mac
DVD burner maka Mac
1. Free DVD burner maka Mac
2. Ọkụ DVD on Mavericks
3. DVD Onye kere maka Mac
5. Mepụta DVD on Mavericks
6. DVDFab Alternative maka Mac
7. DVDFab ọzọ maka Mavericks
8. DVDFlick maka Mac
9. Ọ bụla DVD maka Mac
11. CD burner XP maka Mac
12. Nero Alternative maka Mac
13. Imgburn Alternative maka Mac
14. DVDFab Alternative maka Mac
Achọ a free DVD ọkụ na ngwá ọrụ Mac na yiri DVD Ndinam atụmatụ nke iDVD? Na ị bụ nri ebe a. Isiokwu a ga-ewebata top 10 free DVD burners na mfe atụmatụ maka Mac OS X. Nweta kasị mma free DVD burners n'ihi na gị Mac ugbu a.
Nkebi nke 1: Top 10 FREE DVD Creators maka Mac
Part 2: More Option: a Professional & Ike DVD Creator for Mac
Apa ọkụ nwere uru obosara aha maka ọkụ niile ụdị faịlụ ka data DVD maka nkwado ndabere na mpaghara nzube, ma ọ bụ playable CD / DVD. Ị pụrụ ọbụna iji ire n'ihi Mac (Ọdụm ugwu akwado) idetuo DVD faịlụ (.dmg, iso, cue / biini, wdg) Ọ ọbụna na-akwado authoring mfe kenkwukorita DVD menu ka azụmahịa DVD fim. Ọ bụ nile-na-otu DVD ọkụ Toolkit dị ka ImgBurn maka Windows, nke bụ na-emeghe isi DVD-ere ọkụ software na SourceForge.
Mụta ihe banyere Ọkụ >>
Ọ bụ ezie na LiquidCD si homepage dị umeala n'obi, LiquidCD bụ oké DVD ọkụ ngwa n'ihi na free. Dị ka ọkụ, ọ na-ekwe ka ị na-ọkụ fọrọ nke nta ọ bụla CD na DVD media. Otutu asụsụ na-akwado: English, French, German, Spanish na Danish. E nwere Forum n'ihi na ọrụ ịjụ na-aza ajụjụ, ma ọ bụ na French. Gaa Leta homepage nke a free Mac DVD burner.
Mụta ihe banyere LiquidCD >>
Adịghị emegharị ya apa ọkụ. BurnX bụ ihe ọzọ na free DVD burner maka Mac na Windows mepụtara HernanSoft. Na a mfe na onye ọrụ-enyi na enyi interface, BurnX-ahapụ gị ọkụ playable CD / DVD site Ịdọrọ na idobe faịlụ ka usoro ihe omume. Nke a bụ yiri Wondershare DVD Creator for Mac (El Capitan gụnyere), nke na-akwado Ịdọrọ na idobe faịlụ ka ọkụ DVD diski na elu àgwà. Niile ewu video formats na-akwado, gụnyere ma na ọnweghị oke MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, 3G2, MOV, F4V, M4V, mpg, MPEG, TS, TRP, M2TS, TP, DAT, WMV, MKV, ASF, MOD, Tod na na.
Mụta ihe banyere BurnX >>
4: Nanị Burns
A bụ ihe ọzọ ọ dịghị-abụghị uche DVD burner na a mfe interface na-arụ ọrụ. Ngwa na-enye arụmọrụ maka anagide media, ripping, e kere eke nke audio, data discs na kwa na-ere ọkụ otu ihe oyiyi nke a na-ama echekwara na kọmputa.
Mụta ihe banyere Nanị Burns >>
5: Express Ọkụ
Express apa ọkụ bụ ihe ọzọ pụrụ ịdabere na free usoro ihe omume Mac. Ọ na-akwado gị ka ị na ọkụ videos ka Blu-ray, HD-DVD nakwa dị ka ISO oyiyi. Onye ọrụ interface dị mfe na kensinammuo otú ị ga-ozugbo mara otú iji ya na mbụ n'anya.
Mụta ihe banyere Express Ọkụ >>
6: Disc burner maka Mac
Ịkparị burner maka Mac bụ ihe nile-na-otu video ọkụ na ngwá ọrụ Mac. Ọ na-enyere gị iji hazie ọdịnaya, echekwa gị niile dijitalụ ọdịnaya na Disc na ọkụ na-DVD nakwa dị ka ISO faịlụ. Ọzọ oké mma bụ na o nwere otu nhọrọ na-oyiyi faịlụ site DVD gị obodo ike mbanye.
Mụta ihe banyere Disc burner maka Mac >>
Nke a bụ ihe ngwa nke na-enye ohere ọrụ ike oyiri faịlụ nke ụdị ọ bụla nke CD. Ọ nwere ike na-aghọta CD nke na-adịghị ghọtara site ọzọ Mac OS X ngwa. Ọ ga-eji na-esure SVCD na VCD na kwa enye ohere ụfọdụ atụmatụ dị ka overburning. Nke a nwere ike ịbụ oké ngwá ọrụ maka-ere ọkụ oyiyi si discs. Free ịchọta ebe a.
iTunes bụ usoro ihe omume ya dị ka ọ na-enye ohere ka ndị ọrụ na ọ bụghị nanị ọkụ ma na-na-na-ahazi na ala, ịzụta ma kpọọ mgbasa ozi faịlụ. E wezụga na-ere ọkụ, usoro ihe omume atụmatụ na-agụnye, TV na-egosi, iTunes Radio, fim na Music ka DVD.
Mụta ihe banyere iTunes >>
Finder naanị asakde data DVD diski. Ọ pụrụ ịchọta ndabara na Mac nke na-enyere ọkụ nke discs na-adịghị mkpa a ọzọ omume. Nke a nwere ike mere site dị nnọọ inserting a diski na na SuperDrive. Họrọ Mepee Finder na Ohere nke na-egosi na ihuenyo na pịa OK. N'okpuru ebe Untitled DVD nwere ike renamed. Ugbu a ndị ọrụ nwere ike ịdọrọ na dobe faịlụ na-nsure na ndepụta. Pịa na ndepụta na mgbe ahụ na apa ọkụ nhọrọ. A mmapụta elu window ga-egosi na nke onye ọrụ nwere pịa na apa ọkụ bọtịnụ.
Mụta ihe banyere Finder >>
Mụta ihe banyere iDVD >>
Part 2: More nhọrọ nke a Professional & Ike DVD Creator
Na-atụ aro: Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Nke a Wondershare DVD eme ngwá ọrụ bụ nnọọ ike All-na-otu Video ngwọta ngwá ọrụ. Ọ bụ a vasatail ngwá ọrụ maka ya dị ike na ọrụ karịrị ndị ọzọ DVD eso na ahịa. Ọzọkwa ị ga-n'anya na ya ngwa ngwa ọkụ ọsọ na elu DVD mmepụta mma. Ọzọkwa, ị nwekwara ike tọghata, dezie, download, ndekọ, hazie ma na-ekiri video na n'elu 150 formats na ngwá ọrụ.
Ọkụ video fọrọ nke nta ke ọ bụla usoro, hazie gị DVD na free DVD menu ndebiri.
Tọghata N'ime 150 Formats gụnyere 4K / 3D.
Download videos si ọzọ 1000+ video nkekọrịta na saịtị na One Click!
Mfe idekọ nkwanye online videos
Akwado os: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6, Windows 10/8/7 / XP / Vista
Olee otú Ọkụ Video ka DVD na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (El Capitan gụnyere)
Download na wụnye software, pịa "ọkụ" na interface, wee tinye gị video faịlụ n'ime a ngwa.
Mee na-wuru NchNhr Templates
Pịa mgbanwe template na nri menu itinye ọkacha mmasị gị menu ndebiri. Ime a ọkachamara DVD dịtụbeghị a mfe.
Ọkụ video ka DVD
Mgbe ị na-ahọrọ a templeat, wee pịa "Ọkụ" button na-amalite na-esure DVD.
Ozi ọzọ na Olee otú Jiri Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Mac Mpịakọta Iweghachite: Olee naghachi Data si Lost Mac Mpịakọta
Mac Email Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ Email on Mac
Download Best Vdownloader maka Mac
Download CDBurnerXP maka Mac Ọkụ DVD Discs (Mavericks akwado)
> Resource> Mac> Free Mac DVD burner: Top 10 DVD-ere Ọkụ Software maka Mac